Burmese page5of 20 - English-Video.net
Anne Lamott: ဘဝနှင့် စာရေးသားခြင်းမှ သင်ယူခဲ့ရသော အမှန်တရား ၁၂ ခု။
အသက် ၆၁ နှစ် မပြည့်ခင် ရက်အနည်းငယ်အလိုမှာ စာရေးဆရာမ Anne Lamott ဟာ သူမ အသေအချာသိတဲ့ အရာတိုင်းကို ရေးချဖို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ပင်ကိုယ် လက္ခဏာ ဘဝ ခံယူချက် ဉာဏ်ပညာနဲ့ မိသားစုအကြောင်း ဟာသဉာဏ်၊ စာရေးသားခြင်း ဘုရားသခင်ရဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ်၊ မရဏနဲ့ နောက်ထပ်အရာတွေကို ပေးကမ်းရင်း စိတ်ရှုပ်ဖွယ်ကောင်းသော၊ လှပသော၊ စိတ်လှုပ်ရှားစေသော ကမ္ဘာတစ်ခုမှာ လူသားတစ်ဦးဖြစ်ရခြင်းရဲ့ သိမ်မွေ့တဲ့ ကွဲပြားချက်တွေထဲကို ငုပ်ဝင်လိုက်ပါတယ်။
Tim Ferriss: ဘာကြောင့် ပန်းတိုင်တွေအစား ပူပင်မှုတွေကို သတ်မှတ်သင့်သလဲ
ခက်ခဲတဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေ ... ကျွန်ုပ်တို့ ပြုလုပ်ဖို့၊ မေးမြန်းဖို့၊ ပြောဆိုဖို့ အကြောက်ဆုံး အရာတွေက ... မကြာခဏဆိုသလို ကျွန်ုပ်တို့ တကယ်စစ်စစ် လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အရာတွေပါပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တုံဆိုင်းစေတာကို ဘယ်လို ကျော်လွှားပြီးတော့ လုပ်ဆောင်နိုင်မလဲ။ Tim Ferriss က ကျွန်ုပ်တို့ကို ကိုယ့်ပူပန်မှုတွေကို မှန်းဆကြည့်ပြီး အသေးစိတ်ချရေးဖို့အတွက် ရိုးရှင်းပေမယ့် အစွမ်းထက်တဲ့ "ပူပန်မှု ချမှတ်ခြင်း" လို့သူခေါ်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကို ပြုလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ဒီအလေ့အထက သင့်ကို စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာ ရှင်သန်နိုင်ဖို့နဲ့ ကိုယ်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အရာနဲ့ မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အရာကို ခွဲခြားနိုင်အောင် ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်မလဲဆိုတာကို ပိုမိုလေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Mehdi Ordikhani-Seyedlar: အာရုံစိုက်တဲ့အခါ သင့်ဦးနှောက်အတွင်းမှာ ဘာတွေဖြစ်တတ်လဲ။
အာရုံစိုက်တာဟာ ကျွန်ုပ်တို့ စူးစိုက်တဲ့ အကြောင်းတင်မဟုတ်ပဲ ဒါဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဦးနှောက်တွေက စစ်ထုတ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေ စူးစိုက်ဖို့ ကြိုးစားစဉ် ဦးနှောက်အတွင်းက အဆင်တွေကို သုသေသနလုပ်ရင်းကနေ ကွန်ပြူတာဆိုင်ရာ ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောပညာရှင် Mehdi Ordikhani-Seyedlar ကနေပြီး ဦးနှောက်နဲ့ ကွန်ပြူတာကို ပိုနီးကပ်စွာ အတူတူထားကာ ADHD (အာရုံစိုက်မှု လျော့နည်းတဲ့ရောဂါ) ကို ကုသဖို့ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ပုံစံများကို တည်ဆောက်ရင်း ဆက်သွယ် စကာ​ပြောဆိုနိုင်စွမ်းကို ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ဒီလူတွေကို ကူညီဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ဒီတိုတောင်းပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ဟောပြောချက်ထဲက စိတ်လှုပ်ရှားစရာ သိပ္ပံအကြောင်းကို ပိုမိုနားဆင်လိုက်ပါဦး။
Rhiannon Giddens: သမိုင်းကို အသက်ဝင်စေတဲ့ သီချင်းသုံးပုဒ်။
Rhiannon Giddens ဟာ သူမရဲ့ ဂီတထဲကို အမေရိကန်သမိုင်းရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစေတဲ့ ဩဇာသက်ရောက်မှုကို သွန်းလောင်းပေးနိုင်သူပါ။ ရိုးရာ ကျေးလက် ဇာတ်လမ်းကဗျာ နှစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ Waterboy" နဲ့ "Up Above My Head" နှင့်အတူ ပြည်တွင်းစစ်ကာလ ကျွန်ဇာတ်လမ်းတွေကနေ စေ့ဆော်မှုရခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်သီချင်း "Come Love Come" ကို သူမဖျော်ဖြေစဉ်အခိုက်မှာ နားဆင်လိုက်ပါဦး။
Sofi Tukker: အာဝူး "Awoo"
အီလက်ထရို ပေါ့ပ် နှစ်ဦးတွဲဖျော်ဖြေမှုမှာ Sofi Tukker ကနေပြီး TED ပရိတ်သတ်နဲ့အတူ Betta Lemme ပါဝင်တဲ့ သူတို့ရဲ့ အမြန်တေးသွား စည်းချက်ကျတဲ့ သီချင်း"Awoo" ကို ကပြတင်ဆက်ထားပါတယ်။
Garry Kasparov: အသိဉာဏ်ပါတဲ့ စက်တွေကို မကြောက်ကြပါနဲ့၊ သူတို့နဲ့အတူ အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြပါ
ကျွန်တော်တို့ဟာ နည်းပညာထံမှ အများဆုံးကို ရယူချင်ရင် --ကိုယ့် ကြောက်စိတ်တွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ လိုတယ်လို့ Garry Kasparov က ဆိုပါတယ်။ သမိုင်းထဲမှာ အကြီးမားဆုံး စစ်တုရင် ကစားသူ Kasparov ဟာ ဟိုလေးတကျော် ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ IBM စူပါကွန်ပျူတာ Deep Blue နဲ့ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ ကစားစဉ် ရှုံးသွားခဲ့တယ်။ အခုတော့ သူဟာ အသိဉာဏ်ပါတဲ့ စက်တွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကြီးမားဆုံး စိတ်ကူးတွေကို လက်တွေ့ ရုပ်လုံးဖေါ်နိိုင်အောင် ကျွန်တော်တို့အား ကူညီပေးနိုင်ပုံကို မျှဝေထားပါတယ်။
Sitawa Wafula: ဝက်ရူးပြန်ရောဂါနဲ့ ရှင်သန်ခြင်းအကြောင်းကို ဘာလို့ ဖွင့်ဟပြောတာလဲ။
တစ်ခါက ဝက်ရူးပြန်ရောဂါကြောင့် အိမ်တွင်းအောင်းနေရတဲ့ စိတ်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ရှေ့နေ Sitawa Wafula ဟာ ဒီအကြောင်းကို ရေးသားဖို့ အားအင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခု သူမဟာ အရှက်ရခြင်းနဲ့ ချန်လှပ်ခံရခြင်းကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ဒီအခြေအနေနဲ့ ရှင်သန်နေထိုင်ရတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ ဆိုတာကို ပြောပြဖို့ အသံတွေကို ရှာနေကြတဲ့ အခြားသူတွေအတွက် ထောက်ခံ ပြောပြထားပါတယ်။
Wendy Troxel: ဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက်ကျောင်းစချိန်ဘာကြောင့်နောက်ဆုတ်သင့်သလဲ
ဆယ်ကျော်သက်များသည် အိပ်စက်ချိန် လုံလုံလောက်လောက် မရကြပါ။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ Snapchat ကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ အပေါင်းအသင်း အပျော်အပါး ကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဟော်မုန်းများ ကြောင့်သော်လည်းကောင်း မဟုတ်ပဲ အများပြည်သူဆိုင်ရာမူဝါဒ ကြောင့်ဟု Wendy Troxel ကဆိုပါသည်။ အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာ သုသေတီ တစ်ဦး အနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူနာများနှင့်တွေ့ဆုံလေ့ရှိသူ တစ်ဦး အနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦး၏ မိခင်တစ်ဦး အနေဖြင့်လည်းကောင်း သူမ၏အတွေ့အကြုံများမှ Troxel က ဆယ်ကျော်သက်များ၏ မနက်စောစော ကျောင်းစချိန်သည် ကလေးများကို သူတို့ဘဝ၏ အလိုအပ်ဆုံးအချိန်တွင် လုံလောက်သော အိပ်စက်ခြင်း မရရှိစေနိုင်ကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါသည်။
Karim Abouelnaga: ကလေးငယ်တွေ တက်ရောက်ချင်တဲ့ နွေရာသီကျောင်း။
နွေရာသီအတွင်းမှာ US မှာရှိတဲ့ ဝင်ငွေနိမ့်တဲ့ ရပ်ကွက်တွေက ကလေးငယ်တွေဟာ ကျောင်းစာသင်နှစ်အတွင်း သူတို့ သင်ယူတာရဲ့ သုံးလစာနီးပါးကို မေ့နေကြတယ်။ ပညာရေး စွန့်ဦးထွင်နဲ့ TED ဝိုင်းတော်သား Karim Abouelnaga ဟာ။ "နွေရာသီ ထိုးကျချိန်"ကို ပိုကောင်းတဲ့ အနာဂတ်တစ်ခုဆီ ရှေ့ဆက် တိုးပွားသွားတဲ့ အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲရင်း ဒီသင်ယူခြင်း ဆုံးရှုံးမှုကို ပြောင်းပြန် လှန်ပစ်ချင်ပါတယ်။
Serena Willans and Gayle King: တင်းနစ်၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ မိခင်ဘဝ အကြောင်း
နှစ်ဆယ့်သုံးခုသော Grand Slam တံခွန်စိုက်တွေပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ တင်းနစ် ဆူပါစတား Serena Williams ဟာ သူမရဲ့ ဘဝ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ၊ အနိုင်တွေနဲ့ အရှုံးတွေအကြောင်း နွေးထွေးပြီး ကျီစယ်တဲ့သဘောပါတဲ့ ဆွေးနွေးချက်ကို မျှဝေဖို့ သတင်းစာသမား Gayle King နဲ့ ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဆိုတဲ့ သတင်းကို ကမ္ဘာကြီးနဲ့ အမှတ်မထင်ပဲ မျှဝေမိတယ်ဆိုတဲ့ အဖြစ်နဲ့ စလိုက်ခြင်းပါ။
ဘာ​ကြောင့် လူတိုင်းပါဝင်တဲ့ အနာဂတ်ကိုသာ တည်ဆောက်ထိုက်ပုံ။
"တည်ရှိဖို့ မျှော်လင့်ချက်အတွက် လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတည်းဟာ လုံလောက်ပြီး ထိုပိုဂ္ဂိုလ်ဟာ သင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်" လို့ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis က Vatican City ကနေ ပို့သတဲ့ ဒီလောင်မြိုက်နေတဲ့ TED Talk မှာ ဆိုထားပါတယ်။ ဘာသာအယူဝါဒ အားလုံးထဲက လူတွေထံ၊ အာဏာရှိသူတွေရော၊ အာဏာမဲ့တွေရောဆီအတွက် ဒီမျှော်လင့်ချက်ရှိတဲ့ သတင်းစကားမှာ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်ကနေပြီး ညီမျှမှု၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ သိမ်မွေ့မှု ပျံ့နှံ့ဖြစ်တည်ဖို့ဖို့ လောလောဆယ် ကျွန်ုပ်တို့ ရှာဖွေ၊ တောင်းဆိုကြသလို ကမ္ဘာပေါ်မှာ ထွန်းလင်းပြသပေးတဲ့ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချက်ကို ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ "အချင်းချင်း ကူညီကြပါစို့၊ အားလုံး အတူစုပြီး 'အခြား'ဆိုတာဟာ စာရင်း(သို့) ကိန်းတစ်ခုမဟုတ်တာကို သတိရကြဖို့နဲ့ ကျွနိုပ်တို့ အားလုံးဟာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး လိုအပ်ကြပါတယ်"လို့ ဆိုထားပါတယ်။
မိုက်ကယ်(လ်) ဘိုင်းရု: ကလေးေတွစာဖတ်ေစချင်လာေအာင် စာြကည့်တိုက်ကို ဘယ်လို ဒီဇိုင်းဆဲွမလဲ
အစိုးရကေျာင်းေတွအတွက် တံဆိပ်ဆွဲဖို့ေခါ်ရာကနေ, သူက တစ်နှစ်ကြာတယ့် စီမံကိန်းတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ မယုံနို်င်စရာြဖစ်ေနတယ်. မကြာခဏ ဟာသနှောတဲ့ ေဟာေြပာမှုမှာ, သူ့ရဲ့ဆန္ဒပြင်းြပင်းြပပြ နဲ့ အင်းအားေတွ, သင်ယူမှုေတွ, အနုပညာနဲ့ ဒီဇိုင်းေတွ ကို, စာြကည့်တိုက်မှူးေတွက မျုိးဆက်သစ်ေတွ စာဖတ်သူြဖစ်လာြပီးေတာ့ ေတွးေတာတတ်သူြဖစ်လာေအာင် နှုိးေဆာ်ေပးမယ့်, အံ့သြစရာေကာင်းတဲ့ေနရာတစ်ခုကို ယူေဆာင်လာပုံကို ြပန်လည်ေြပာြပခဲ့တယ်.
Carina Morillo: အထီးကျန် စိတ်ဝေဒနာကို နားလည်ဖို့ မျက်နှာမလွှဲပါနဲ့။
Carina Morillo ဟာ သူမရဲ့သား Ivan ရောဂါစပေါ်တော့ အထီးကျန် စိတ်ဝေဒနာအကြောင်းကို ဘာမှ မသိသလောက်ပါ။ သူ စကားမပြောဘူး ဒါမှမဟုတ် စကားလုံးတွေကို မတုံ့ပြန်ဘူးဆိုတာ လောက်ဖြစ်ပြီး သူနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့အတွက် အခြားနည်းလမ်းတွေ ရှာခဲ့ရပါတယ်။ သူနဲ့အတူလိုက်ပြီး သိချင်စိတ်ဖြစ်ခြင်းကနေ သူမရဲ့သားကို ဖွံ့ဖြိုးရှင်သန်စေဖို့ အထောက်အကူပေးဖို့ ဘယ်လို သူမလေ့လာ သင်ယူခဲ့တယ်ဆိုတာကို မျှဝေထားပါတယ်။
Siddhartha Roy: အများပြည်သူ ကောင်းကျိုးကို ဝန်ဆောင်ပေးမယ့် သိပ္ပံပညာ
ကျွန်ုပ်တို့ဟာ သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေကို နည်းပညာတွေကို သင်ရာမှာ တော်ကြပေမဲ့၊ လူ့ကျင့်ဝတ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်နိုင်အောင် ဒါမှမဟုတ် အကျင့်စာရိတ္တကို ပျိုးထောင်ပေးရန် သိပ် အားမထုတ်ကြပါ။ ဥပမာအဖြစ်၊Michigan ဒေသ Flint မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အရေးအခင်းကို ယူကြည့်နိုင်ကြပါတယ်။ အဲဒီမှာ ရှိနေခဲ့ကြတဲ့ ပညာရှင်တွေဟာအဲဒါကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ ဘာမှ လုပ်မပေးခဲ့ကြပါ။ Flint ရဲ့ သောက်ရေ ညစ်ညမ်းနေကြောင်းကို Siddhartha Roy ကမှ သကသေထူပြနိုင်အောင် ကူညီပေးခဲ့တာပါ။ ဒီဟော​ပြောချက်ထဲတွင် သူဟာ အများပြည်သူ အကျိုးကို သည်းပိုးပေးရမယ့် သိပ္ပံပညာရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို ​ပြောပြရင်း အနာဂတ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေကို ပြည်သူများနဲ့ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကို ကာကွယ်ဖို့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြရန် လှုံ့ဆော်ထားပါတယ်။
Stephanie Busari: သတင်းတုများက တကယ့် အန္တရာယ်ပြုပုံ
၂၀၁၄ ဧပြီလ ၁၄ ရက်မှာ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့အစည်း Boko Haram ဟာ နိက်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ Chibok မြို့က ကျောင်းသူ ၂၀၀ ကျော်ကို ပြန်ပေးဆွဲခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ဒီမှုခင်းဟာ #BringBackOurGirls ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်နဲ့ စံနမူနာဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုက်ဂျီးရီးယားမှာတော့ အစိုးရ အာဏာပိုင်တွေက မိန်းကလေးတွေကို ကယ်တင်ဖို့ အားထုတ် ဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ ဇဝေဇဝါဖြစ်ရင်း နှောင့်နှေးရင်း ဒီအမှုကို လိမ်ညာမှုလို့ ခေါ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီအားကောင်းလှတဲ့ ဟောပြောချက်မှာ သတင်းစာသမား Stephanie Busari ကနေပြီး သတင်းတုတွေရဲ့ ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ ဒါကိုတားဆီးဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်နိုင်တာကို ရှင်းပြဖို့ Chibok ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ အဖြစ်ဆိုးကို ထောက်ပြလိုက်ပါတယ်။
Zubaida Bai: ဖွံ့ဖြိုးဆဲ ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ မိခင်များအတွက် ရိုးရှင်းတဲ့ သားဖွား ကိရိယာတစ်စုံ။
TED ဝိုင်းတော်သား Zubaida Bai ဟာ အမျိုးသမီး ကျန်မာရေး စောင့်ရှောက်မှုဆီကို ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုနဲ့ အကုန်အကျသက်သာစေတဲ့ ကြားဝင်မှုတွေ ဆောင်ကြဉ်းပေးဖို့ ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေ၊ ဝမ်းဆွဲလက်သည်တွေ၊ မိခင်တွေနဲ့ တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ပါတယ်။ ဒီတိုတောင်ပြီး စေ့ဆော်ပေးတဲ့ ဟောပြောချက်မှာ သူမကနေပြီး ပိုက်ဆံအိတ်တစ်အိတ်ထဲ ထည့်လို့ရတဲ့ သူမရဲ့ သန့်ရှင်းတဲ့ သားဖွား ကိရိယာတစ်စုံကို တင်ပြထားပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ဘယ်နေရာကဖြစ်ဖြစ်၊ ဆေးခန်းနဲ့ ဘယ်လောက်ဝေးဝေးမှာ သူမ ရှိနေပါစေပါ အဲဒီထဲမှာ လိုအပ်တဲ့ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ မွေးဖွားမှုနဲ့ ကျန်းမာတဲ့ မီဖွားမှုတစ်ခုအတွက် မိခင်လောင်းသစ် လိုအပ်တဲ့ အရာရာတိုင်းပါဝင်ပါတယ်။ ။
Todd Scott: နှလုံးခုန်နှိုးစက် အသုံးပြုခြင်းအတွက် စကြာဝဠာအချင်းချင်း လမ်းညွှန်
အကယ်၍များ Yoda ဟာ နှုလုံးခုန်ရပ်တန့်သွားတယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သင်သိလား။ ပန်းချီပညာရှင်နဲ့ ရှေးဦးသူနာပြု ဝါသနာအိုး Todd Scott ဟာ သင်သိဖို့လို့တဲ့ စက်သုံး ပြင်ပနှလုံးခုန်နှိုးစက် (သို့) AED နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အရာတိုင်းကို ဒီကြယ်စုထဲမှာ ခွဲတမ်းချလိုက်ပါတယ်၊ အဝေး အဝေးမှာရှိတဲ့ ကြယ်စုတွေပေါ့။ Jedi ရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်ဖို့ ပြင်ဆင်လိုက်ပါ။ (သူက အရင်ဆုံး အမြန်လေး ရိတ်ပစ်ဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်) ဒါမှမဟုတ် အထောက်အကူပြုတဲ့ ပုံနှိပ်စက်တစ်ချို့ လိုနေတဲ့ အခြားတစ်ယောက်ယောက်ကိုပေါ့။
Ari Wallach: တကယ့်ကို ရေရှည်အတွက် စီမံရေး နည်းလမ်း သုံးမျိုး
ကျွန်တော်တို့ဟာ ရေတို ပန်းတိုင်များနှင့် လိုအပ်ချက်များကို အခြေခံလျက် ဆုံးဖြတ်ချက် အများအပြားကို ချမှတ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ရေရှည်အနာဂတ် ပိုပြီးကောင်းမွန်စေဖို့ ဘယ်လိုများ စဉ်းစားပြီး စီမံသင့်သလဲ။ Ari Wallach က လတ်တလောကိစ္စများကို ကျော်လွန်ပြီး စဉ်းစားနိုင်မယ့် နည်းဗျူဟာ သုံးမျိုးကို မျှဝေထားပါတယ်။
Katie Hinde: မိခင်နို့အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ မသိတာတွေ
မိခင်ရဲ့ နို့ဟာ ကလေးတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကြီးထွားလာစေတယ်၊ အာရုံကြော ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဖြည့်တင်းပေးတယ်၊ အရေးပါတဲ့ ကိုယ်ခံအားကို အားဖြည့်ပေးပြီး အစာရေစာ ရှားပါးမှု နှင့် ရောဂါဘယများမှ ကာကွယ်ပေးတယ် ဆိုတော့၊ ဘာ​ေကြာင့် သိပ္ပံပညာဟာ ခရမ်းချဉ်သီးတွေ အကြောင်းကို မိခင်နို့ထက် ပိုပြီး သိရှိနေရတာလဲ။ Katie Hinde က အသက်ကို မွေထုတ်ပေးတဲ့ နက်နဲရှုပ်ထွေးလှတဲ့ အဲဒီ အရာ အကြောင်းကို အတွင်းကျ ဖေါ်ထုတ် တင်ပြထားပြီး မိခင်နို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ အနေနဲ့ ပိုပြီး ကောင်းမွန်စွာ နားလည်လာနိုင်ရန် သိပ္ပံပညာဘက်မှ ဖြည့်ပေးရန် လိုအပ်နေသေးတဲ့ ဟာကွက်တွေ အကြောင်းကို ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
Ashton Cofer: လူငယ် တီထွင်သူလေးရဲ့ ဖော့ဖြူ (Styrofoam )ကို ပြန်လည်အသုံးပြုဖို့ အစီအစဉ်။
မြေပဲထုပ်ပိုးတာနေ တစ်ခါသုံး ကော်ဖီခွက်တွေအထိ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တစ်ခုတည်းမှာတင် တစ်နှစ်ကို Styrofoam (ပလပ်စတစ်ဖော့ဖြူ)နှစ်ဘီလီယံထွက်ရှိပါတယ်၊ တစ်ခုမှကို ပြန်သုံးလို့မရနိုင်တာတွေပါ။ ဒီအရင်းအမြစ်ဖြုန်းတီးမှုနဲ့ မြေဖို့ရတဲ့နေရာကြောင့် စိတ်ပျက်ပြီး သူ့ရဲ့ သိပ္ပံပြပွဲ အသင်းဖော်တွေက အသုံးပြုပြီးသား Styrofoam (ပလပ်စတစ်ဖော့ဖြူ)တွေကို အသုံးဝင်တဲ့ တစ်ခုခုအဖြစ် ဓာတ်ပြိုကွဲအောင်လုပ်ဖို့ အပူပေးခြင်း နည်းစနစ်တစ်ခုကို တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ FIRST LEGO League Global Innovation Award နဲ့ Google Science Fair ကနေ Scientific American Innovator Award ဆုရထားတဲ့ သူတို့ရဲ့ မူရင်းဒီဇိုင်းကို စစ်ဆေးကြည့်လိုက်ပါ။
Michele L. Sullivan: အကူအညီတောင်းခြင်းဟာ ခွန်အားပါ၊ အားနည်းမှု မဟုတ်ပါ
ကျွန်မတို့ အားလုံးဟာ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ကြရတယ်၊ တချို့ကို မြင်နိုင်သလို မမြင်နိုင်တာလည်း ရှိတယ်လို့ Michele L. Sullivan က ဆိုထားပါတယ်။ ဘဝရှုထောင့်ဆိုင်ရာ ဒီဆွေးနွေးခန်းမှာ၊ Sullivan ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးဟာ အပြန်အလှန် ကူညီပံ့ပိုးနေကြရတဲ့ စနစ်များရဲ့ အစိတ်အပိုင်းမျှသာ ဖြစ်ကြတာကို ထောက်ပြနေတဲ့ ဟာသဆိုင်ရာ အမြော်အမြင်ကြီးမားမှုဆိုင်ရာတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ အကြောင်းကို ပြောပြထားပါတယ်။ "ကျွန်မတို့ လမ်းကောင်းကောင်း လျှောက်ချင်ရင် ကိုယ့်ဖိနပ်ကိုသာ စီးရန် လိုပါတယ်၊ စာနာစိတ်၊ အားပေးမှုနဲ့ နားလည်မှုသာ ရှိရင် ကျွန်မတို့ ဘေးချင်းယဉ်ပြီး လမ်းလျှောက်နိုင်ကြမှာပါ။"လို့ သူမက တင်ပြထားတာ နားဆင်ကြည့်ကြပါ။
Caitlin Doughty: ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကို လုပ်ကျွေးပေးမယ့် သင်္ဂြိုဟ်ရေး နည်းလမ်း
ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးက တစ်နေ့မဟုတ် တစ်နေ့တွင် ဖြေကြရမယ့် မေးခွန်း ရှိပါတယ် - ကိုယ် သေသွားတဲ့ အခါမှာ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်လိုများ ဖြစ်သွားစေလိုပါသလဲ? အသုဘ ဌာန တစ်ခုမှ ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ Caitlin Doughty င ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးတို့အား ရှောင်လွဲမရနိုင်တဲ့ သေဆုံးမှုအတွက် ပြင်ဆင်ရေး နည်းလမ်းသစ်တွေကို စူးစမ်း တင်ြပထားပါ တယ်။ စဉ်းစားစရာ ဒီဟောပြောချက်ထဲတွင် လူတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို မြေကြီဆီသို့ ပိုပြီး ဂေဟာစနစ်နဲ့ အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်ကာ နှိမ့်ချမှု သဘော နဲ့ အသိစိတ်ကို ဖေါ်ြပတဲ့ ("ပြန်လည်စုစည်းရေး" နဲ့ "ထိန်းသိမ်းပေးရေး မြှုပ်နှံမှု") လိုနည်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်များကို မြေကြီးဆီသို့ ထည့်ပေးသင့်တာကို ပြောပြထားပါတယ်။
Lux Narayan: နာရေးသတင်း ၂၀၀၀ မှ သင်ယူခဲ့သမျှ။
Lux Narayan ဟာ သူ့ရဲ့တစ်နေ့တာကို ကြက်ဉမွှေကြော်နဲ့ "ဒီနေ့ ဘယ်သူ ဆုံးသွားလဲ" ဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့ အစပြုပါတယ်။ New York Times နာရေးသတင်း၂၀၀၀ကို လပေါင်း ၂၀ ခွဲခြမ်းစိစစ်ခြင်းနဲ့ Narayan ဟာ ဘဝတစ်သက်တာမှာ အောင်မြင်မှုဆိုတာ ဘာနဲ့ တူသလဲဆိုတာကို စကားလုံး အနည်းငယ်နဲ့ ကောက်သင်းကောက်ခဲ့တယ်။ ဟောဒီမှာ သူဟာ ရေးသားပြီး မျှဝေထားတဲ့ အစဉ်မမေ့အပ်တာတွေက ကျွန်ုပ်တို့ကို ကောင်းမွန်စွာ ရှင်သန်ခဲ့တဲ့ ဘဝတစ်ခုအကြောင်း သင်ကြားပေးနိုင်ပါတယ်။
Jeff Kirschner: ဒီအက်ပ်နဲ့ဆို အမှိုက်ကောက်ရတာ ပျော်စရာကြီးပါ
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို သန့်ရှင်းအောင် ထားကြရပါမယ်။ Litterati ဆိုတဲ့ အမှိုက်ကို ဖေါ်ထုတ်ပေးရန်၊ ကောက်ယူရန် နဲ့ ဘူမိတံဆိပ် တပ်ပေးနိုင်တဲ့ အက်ပ်ကို အသုံးပြုပြီး TED ကိုယ်စားလှယ် Jeff Kirschner ဟာ ကမ္ဘာကြီးကို သန့်ရှင်းအောင် လုပ်ပေးနေတဲ့ လူအုပ်စုရင်းမြစ် ဖြစ်လာတဲ့ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကို တီထွင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံ ၁၀၀ ကျော်တို့အထဲက အမှိုက်တွေကို ခြေရာခံပြီးတဲ့ နောက်မှာ Kirschner ဟာ နာမည်ကြီး ကုမ္ပဏီကြီးများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ လက်တွဲပြီး အမှိုက်တွေ မြေကြီးပေါ် ကျမလာအောင် ရပ်တန့်ပစ်ဖို့ သူစုစည်းထားတဲ့ ဒေတာကို သုံးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Jonathan Rossiter: ညစ်ညမ်းမှုကို စားတဲ့ ရိုဘော့
ညစ်ညမ်းတဲ့ ရေကို မျိုချပစ်ရင်း ညစ်ညမ်းမှုတွေကို ရှင်းလင်းပေးကာ ကိုယ်တိုင် အလုပ်လုပ်ရန် လိုအပ်တဲ့ လျှပ်စစ်ကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ "Row-bot" နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ရိုဘော့ ပညာရှင် Jonathan Rossiter က ရေညှိတွေ “ပွင့်မှု’ နဲ့ ရေနံယိုဖိတ်မှုတွေကို ချေဖျက်နိုင်ပြီး ညစ်ညမ်းမှုကို အလိုအလျောက် တိုက်ပွဲဝင်နိုင်မယ့် ကျေပျက်လွယ်ဇီဝ ရိုဘော့ရဲ့ ရှေ့ပြေး နမူနာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ မိုက်ခရိုလောင်စာဆဲလ်ကို သုံးမယ့် အထူးရေကူးစက် အကြောင်းကို ရှင်းပြထားပါတယ်။
Grady Booch: ဆူပါထက်တော်မယ့် AI တွေကို မကြောက်ကြပါနဲ့
နည်းပညာသစ်တွေဟာ စိုးရိမ်စရာ အသစ်တွေ ဖြစ်နိုင်ကြတာ မှန်ပေမဲ့၊ ဘာမဆို လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိကြပြီး ခံစားမှုမရှိကြတဲ့ AI တွေကို ကြောက်စရာ မလိုပါဘူးလို့ သိပ္ပံပညာရှင် နဲ့ ဒဿနိက ပညာရှင်ဖြစ်သူ Grady Booch က ဆိုပါတယ်။ Booch ဟာ သိပ္ပံဝတ္ထုများမှ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ကြတာ ဖြစ်တဲ့ ဆူပါတော်တဲ့ AI တွေဆိုင်ရာ အဆိုးဝါးဆုံး စိုးရိမ်စတ်မှုတွေကို ဖယ်ရှားပစ်ရန်အတွက် AI ကို ကျွန်ုပ်တို့ တန်ဖိုးထားတာတွေကို မျှဝေခံစားရန် ဘယ်လို သင်ကြားပေးမှာကို ရှင်းပြထားပါတယ်။ အလားအလာ နည်းလှတဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ အကြောင်းကို စိုးရိမ်ကြမယ့် အစား၊ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ လူသားတွေရဲ့ ဘဝကို AI ဘယ်လို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ကြတာကို ထည့်စဉ်းစားသင့်တယ်လို့ ၎င်းက ယူဆပါတယ်။